हुनेवाला पतिको लागि यति कडा नियम ? यी युवतीसँग कसले गर्ला बिहे ? – Dcnepal
हुनेवाला पतिको लागि यति कडा नियम ? यी युवतीसँग कसले गर्ला बिहे ?
प्रकाशित : २०७८ मंसिर ७ गते ११:४३
काठमाडौं। एक टिकटकरले आफ्नो हुनेवाला पतिको विषयमा केही कुराहरु पोस्ट गरेकी छिन् जुन सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । बेली नामकी यी टिकटकरले बिहेका केही कडा नियमहरुको सूची बनाएकी छिन् । यी नियमहरु उनका पतिले पालना गर्नुपर्नेछ ।
बेलीले भिडियोमा अन्तिम र सबैभन्दा महत्वपूर्ण नियमबारे बताउँदै भनेकी छिन् ‘हामी दुवै एक अर्कालाई सबैभन्दा धेरै महत्व दिनेछौं । यहाँसम्म कि आफ्ना माता पिता भन्दा पनि माथि आफ्नो पार्टनरलाई राख्नेछौं ।’ अहिलेसम्म बेलीको यो भिडियोलाई २.३ मिलियन भन्दा धेरैले हेरिसकेका छन् । मानिसहरुले यसप्रति अनौठा प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।